ပြည်သူများ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ မဖြစ်စေရန် ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသော ငွေကြေးလုပ်ငန်းများ ဟုတ်၊ - Yangon Media Group
တရားဝင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်မရှိဘဲ လုပ်ကိုင်နေသောငွေရေးကြေး ရေးလုပ်ငန်းများကြောင့် ပြည်သူများ ၏ငွေကြေးများနစ်နာဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်စေရန် ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသော ဘဏ်(သို့မဟုတ်)ငွေရေး၊ ကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်း ကျကျနနစူးစမ်းလေ့လာရန်လိုအပ်ကြောင်း စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်ဝင်းက အောက်တိုဘာ ၃ ရက်ကပြောသည်။
တရားဝင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်မရှိဘဲ လုပ်ကိုင်နေသော ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းများ ကြောင့် အများပြည်သူများ၏ငွေကြေးနစ်နာဆုံးရှုံးနေသည်ဆိုသော သတင်းများကြားသိရမှုအပေါ်တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်ဝင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးသိန်းနှင့်မြန်မာနိုင်ငံ တော်ဗဟိုဘဏ်ငွေချေးသက်သေ ခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေး ကော်မရှင်မှညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်တင်တင်အုန်းတို့ကရုပ်မြင်သံ ကြားအစီအစဉ်မှဆွေးနွေးတင်ပြမှု ရိုက်ကူးရေးကို အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်က နေပြည်တော်ရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရုံးခန်း (ရုံးအမှတ်၂၆)တွင်ပြုလုပ်စဉ်ယင်းသို့ပြောခြင်းဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမောင်မောင် ဝင်းက”တရားဝင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ခွင့်လိုင်စင်မရှိဘဲလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ငွေ ရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းများကြောင့် အများပြည်သူတွေရဲ့ ငွေကြေးများ နစ်နာဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းများကိုကြားသိရပါတယ်။ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ခွင့်ပြုနိုင်သူထံမှ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်တွေရပြီးမှသာ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမရဘဲနဲ့လုပ် တာကတော့ တရားမဝင်ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြစ်ပြီး တည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါ တယ်။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့သေချာ သတိပြုပြီး ဒါဟာဥပဒေအရခွင့်ပြု ထားတဲ့ဘဏ်လား။ ဘဏ်မဟုတ်တဲ့ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းလား။ ဒါတွေကိုကျကျနနစူးစမ်းလေ့လာဖို့လိုပါတယ်”ဟုပြောသည်။ တရားမဝင်လုပ်ကိုင်နေသော ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ သည်မသိနားမလည်လူများကိုအဓိ ကပစ်မှတ်ထားကာပိုမိုလိမ်ညာမှု ပြုလုပ်ကြပြီး အပ်ငွေအားအတိုး ကောင်းကောင်းပေးမည်ဟုဆိုကာ ငွေလာအပ်နှံရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ကြောင့် အမြတ်များများရချင်ဇော ဖြင့် ငွေကြေးလိမ်ညာမှုများခံနေရ ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးသိန်းက”ငွေရေး ကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေမှာပါတဲ့ပုဒ်မ-၁၆၃ မှာဘယ်သူမှ အပ်ငွေလက်ခံတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို ဗဟိုဘဏ်မှ ထုတ်ပေးထားတဲ့လိုင် စင်မရှိဘဲနဲ့မဆောင်ရွက်ရဘူးဆိုတဲ့ ကန့်သတ်တားမြစ်ချက်မျိုးယူထားတာရှိပါတယ်။ ပုဒ်မ-၁၇၁ မှာ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ပုဒ်မ-၈နဲ့ ပုဒ်မ-၂၃ အရ ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့လိုင်စင်မရှိဘဲနဲ့ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ ဘဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟိုဘဏ်က ခွင့်မပြုထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်ရင် ထောင်ဒဏ်အနည်းဆုံးနှစ်နှစ်မှ ငါးနှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်တယ်။ ငွေဒဏ်ကကျပ်သန်း ၅ဝဝ အထိချမှတ်နိုင်တယ်။ အဲဒီနှစ်ခုလုံးတစ်တွဲတည်း ချမှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ပြစ်ဒဏ်သတ် မှတ်ချက်ရှိပါတယ်”ဟု ဆိုသည်။ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေတွင်မူလိုင်စင်နှစ်မျိုးထုတ်ပေး ကြောင်း။ ပထမလိုင်စင်မှာ နိုင်ငံ ခြားသုံးငွေ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား ခွင့်လိုင်စင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ငွေကြေး လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း နည်းမျိုးစုံဖြင့် ရယူထားပြီး လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ခြင်း မရှိသည့်
ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ မသမာမှုများကို တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် အောက်တိုဘာလ အတွင်း တစ်ပြိ??
ဝင်ငွေရလမ်း မဖော်ပြနိုင်သော ငွေကြေးများ အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ငွေမည်းများ ဝ??
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထံ ကေအင်န်ယူ ပေးပို့သောစာ ပေါက်ကြားခြင်းမှာ မဖြစ်သင့်ဟုဆ?